Wasiir beeniyey inuu iska casilay xilkii xalay loo magacaabay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xildhibaan Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo xalay loo magacaabay wasiirka Beeraha dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa beeniyey warar soo baxay oo sheegayey inuu xilkaas iska casilay.
Wasiir Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo ah Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Beeraha Soomaaliya oo la haddlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in aanu waxba ka jirin haba yaraatee wararka ay Warbaahinada qaar baahiyen oo sheegayay in uu iska casilay Xilkii Wasiirnimo ee loo magacaabay
“Waan ku faraxsanahay xilka wasiirka Beeraha ee RW Cumar C/rashiid ii magacaabay waana been inaan iska casilay” ayauu yiri Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen.
Wasiirka Beeraha Soomaaliya waxa uu sheegay in uu damacsanyahay in Wasaaradda uu ku soo kordhiyo qorshe badan si loo horumariyo wax soo saarka beeraha oo uu sheegay in muhiimadd wayn ay dalka iyo dadkaba u leedahay.
Hadalka Wasiirka Cusub ee Beeraha Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa waxa uu imaanayaa xilli xalay waqti dambe uun lagu dhawaaqay Golaha Wasiirada cusub ee Soomaaliya, iyadoo Maantana Warbahinada qaar ay qoreen in uu is casilay Wasiirka hase ahaate Wasiirka uu hadalkaas ku tilmaaamay mid been abuur ah.